जनतालाई नजिस्क्याऊ !
डा. गाेपाल ठाकुर बिहीबार, जेठ ३०, २०७६ मा प्रकाशित
म कक्षा ८ मा पढ्दै थिएँ २०३१–०३२ मा । त्यस बेला कक्षा ६, ७ र ८ मा एउटा विषय हिन्दी पनि पढ्नु पर्थ्यो । पुस्तकको नाम थियो, नेपाल दीपिका । त्यसै पुस्तकमा एउटा कुख्यात डाँकाको डँकैतीको शैली र उसले पाएको अर्तीलाई मैले झलझली सम्झिरहेको छु । कथा सार्‍है छोटो थियो ।
उहिले भारतवर्षको एउटा नगर अधिराज्यमा एकजना डाँका थिए, खड्ग सिंह । उनको नामैले आम जनमानस त्रसित थियो । कयौं सम्राटहरूलाई पनि उनी लुटिसकेका थिए । तर आफ्नो राजालाई भने उनी लुट्न सकेको थिएन । यो उनको गिरोहमा एउटा ठूलै चुनौती बनेको थियो र एक दिन आफ्नै राजालाई पनि उनले लुट्ने निधो गरे ।
बिहान–बिहान राजाको घुडसवारीको सोख थियो । एक दिन एउटा जीर्ण अपांगले नगरको मूलद्वारमा उनलाई रोक्‍न खोज्यो । राजा दयालु थिए । उनले घोडा रोकेर ती अपांगको हालचाल सोधे । ती अपांग व्यक्तिले आफ्नो अशक्तता देखाउँदै पर अर्को गाउँसम्म जाने बिन्ती चढाए । राजाले आफ्नो दया प्रदर्शन गर्दै उनलाई आफ्नै अगाडि राखी घोडा दौडाए ।
त्यो गाउँ जान जङ्गल तर्नु पर्थ्यो । बीच जङ्गलमा पुगे पछि ती अपांग व्यक्तिले लगाम आफ्नो हातमा लिएर घोडालाई अनकण्टार ठाउँमा पुर्‍याए । उनले पुरै सुनसान घनघोर जंगलमा घोडा रोकी राजाका सम्पूर्ण वस्त्राभूषण फुकाल्न लगाएर खोसे र राजालाई त्यहीँ छोडेर एक्लै घोडा लिएर बाटो तताउन लागे । अनि राजाले उनको परिचय सोध्दा उनले आफूलाई कुख्यात डाँका खड्गसिंह भनी परिचय गराए ।
राजा विवश थिए तर डाँकालाई यति मात्रै भन्न भ्याए, ‘‘तिमीले मलाई जुन भेषमा लुट्यौ, यस्तो शैली अन्त कतै नदोहोर्‍याएस्, किनभने यसले साँच्चैका अशक्त–अपांगहरूबाट दुनियाँको विश्वास उठ्ने छ ।’’
अहिले दुई तिहाइको सरकार छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हामी नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं । हाम्रो यात्रा समाजवादोन्मुख छ भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । संविधानलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गर्दै जाने भन्दै एक पटक संशोधन पनि गरिसकिएको छ ।
अर्को संशोधनको कुरो पनि चलिरहेकै छ । समानुपातिक समावेशीकरणको लक्ष्य अनुरूप अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यसैले संविधान, ऐन, नियमावलीका धारा र दफाहरूको प्रगतिशील संशोधन गर्दै सरकार र संसद त्यस दिशातिर अग्रसर हुनु पर्दछ । साथै अहिलेको व्यवस्थामा पनि सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छ । तर व्यवहार र अभ्यासमा त्यस्तो देखिँदैन ।
यो सरकार, संविधानको अग्रगामी संशोधन र त्यसै अनुसार ऐन–नियमहरूको परिमार्जन त कता हो कता, तिनमा रहेका पश्चगमनकारी प्राविधिक प्वालहरूबाट छिर्ने दुष्प्रयत्‍न गर्दै पुनः इतिहास निर्माता जनतालाई जिस्क्याउन पो लागेको हो कि भन्ने अनुभूति गराइरहेको छ ।२०५६ मा यस्तै संवैधानिक–कानूनी प्वालहरूको दुषान्वेषण गर्दै सर्वोच्च अदालतले कथित नेपाली बाहेक अन्य भाषाहरूलाई स्थानीय स्तरमा पनि कामकाजमा प्रयोग गर्न वंचित गरेको थियो ।
अहिले पनि संघीय सरकार कामकाजी रूपमा संवैधानिक संकुचनमा टेकेर एकभाषी नै बनेको छ । यसका लागि सिफारिश गर्ने निकाय भाषा आयोगलाई अधूरो त राखेकै छ, त्यहाँ योग्यता नपुगेका पनि छिरेका छन् । सांगीतिक मंचमा गएर ट्वाँ पर्ने पनि संगीतको प्राज्ञ कहलिएका छन् । नेपाल सरकारका यस्ता कतिपय नियुक्तिहरूमा समानुपातिक त कता हो कता समावेशिताको पनि खिल्ली उडाइएको छ र परेका आफन्तहरू पनि वांछनीय योग्यताको प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकारलाई राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेर संविधानको कुन धारालाई टेकेर संबोधन गरेकी हुन् भनेर प्रश्न उठाउँदा पनि जनताले हप्कीदप्की खानु परेको छ । मन्त्रीको निर्देशनमा लोक सेवा आयोगले संघीयतालाई कुल्चँदै असमावेशी विज्ञापन निकाल्छ । संसदीय समितिले मन्त्री र आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिन्छ तर मन्त्री र आयोग दुबैले अटेरी मात्रै गर्दैनन्, संवैधानिक र कानूनी रूपमा रहेका त्रुटीहरूलाई हतियार बनाउँदै संसद र जनतालाई चुनौती दिन्छन् ।
यो मुद्दा एकातिर सर्वोच्च अदालतमा पुगी सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अवस्था छ भने आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडावर्ग, मुस्लिम सहितका वंचितीकरणमा परेका वर्ग र समुदाय सडकमा उत्रेको अवस्था छ ।
आफ्नै विशिष्टतामा सामूहिक क्रियाकलापहरू संचालन गर्न नेपाल खाल्डोमा गुठीको अभ्यास चलिआएको देखिन्छ । तर अहिले सरकारले ती गुठियारहरूलाई बेदखल गर्ने गरी नयाँ गुठी विधेयक ल्याएको छ । नेपाल खाल्डोका पूरै नेवार समुदाय आन्दोलित छन् र उनीहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन र गिरफ्तारी गरेको पनि अवस्था छ ।
यी दृष्टांतहरूले सरकारको यात्रा समाजवादतिर नभई एकजातीय अहंकारवादी अन्धराष्ट्रवादतिर त उन्मुख छैन, भनी जनमानसमा प्रश्नहरू उब्जाएका छन् । यदि त्यसै हो भने नयाँ नेपालका यस्ता बेतालहरूलाई जनताले कतिसम्म सहन गर्ने छन् र ? यस्तै बेथितिहरूले गर्दा विगतका शासकहरूको ‘विकास योजना’ हावा खाएका हुन् ।
किनभने विकास कुनै निरपेक्ष निरन्तरता होइन, यो सापेक्षतावादमा आधारित हुनुपर्छ । अर्थात जनताको अधिकारलाई कुल्चेर विकासको मूल फुट्न सक्तैन । यो इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले हे सरकार, जनतालाई नजिस्क्याऊ !